ကျွန်တော်တို့ သင့်ကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ?
ပင်မစာမျက်နှာကျွန်တော်တို့ သင့်ကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ?
စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်း ဝန်ဆောင်မှု Plan များ ငွေစာရင်း နှင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း နေရာပြောင်းရွေ့ခြင်း၊ Plan ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း
ဖိုင်ဘာအင်တာနက် ဆိုတာ ဘာလဲ?
အိမ်တိုင်ရာရောက် ဖိုင်ဘာချိတ်ဆက်မှု (FTTH) ဆိုတာ ပိုမြန်ဆန်၊ ပိုလိုင်းအားကောင်းပြီး အကန့်အသတ်မဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ရှိတဲ့ စံနှုန်းမြင့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုပါ။ လိုင်းဆွဲအားမငြိမ်မှာ မစိုးရိမ်ရတဲ့အပြင် အသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်ဘာကြိုးတွေဟာ သာမန် copper ကြိုးတွေထက် ၄.၅ ဆ ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ broadband နည်းပညာတွေ အားလုံးထဲမှာ FTTH က အမြန်ဆုံး ဖြစ်နေရတာပေါ့။
Fortune Broadband အသုံးပြုဖို့ဘယ်လို စာရင်းပေးသွင်းရသလဲ?
စာရင်းဖြည့်စွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရောင်းပြခန်းတွေမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်သုံးအတွက်ဆိုရင် နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ကတ် မိတ္တူ ဒါမှအဟုတ် passport မိတ္တူလိုအပ်ပြီး လုပ်ငန်းသုံးအတွက်ဆိုရင် ခွင့်ပြုစာ (authorization letter) ပါဝင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်အရောင်းပြခန်း ဟာ အဆောင်(၁၂)၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
မန္တလေးအရောင်းပြခန်းကတော့ အမှတ် ၁၁၇၊ ၃၄ လမ်း၊ ၇၇× ၇၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေး မှာပါ။
မှတ်ပုံတင်ပြီး ဘယ်လောက်အကြာမှာ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်လိုင်း စ သုံးလို့ ရမလဲ?
တပ်ဆင်ကြေးနဲ့ နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းပြီး ၂ ပတ်ကနေ ၃ ပတ် အကြာမှာ တပ်ဆင်ချိတ်ဆက်ပြီး အသင့် ဖြစ်နေမှာပါ။
အင်တာနက် ကော်နက်ရှင်ကို ပမာဏကန့်သတ်ထားတာ ရှိလား?
မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က unlimited data ဝန်ဆောင်မှုပေးတာမို့ သင် ရရှိ/ ပေးပို့တဲ့ data ပမာဏကို မကန့်သတ်ထားပါဘူး။
ONT ဆိုတာ ဘာလဲ၊ သူက ဘအလုပ်လုပ်လဲ?
ONT ကို modem လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ သူက Termination Point (TP)ကို ဖိုင်ဘာကြိုး ကြ ချိတ်ဆက်ပြီး သင့် router ကိုတော့ LAN / Ethernet ကနေတဆင့် ချိတ်ဆက်ပါတယ်။ ONT ဟာ သင့် TP က ဖိုင်ဘာကြိုးတွေက အချက်အလက်တွေကို သင့်router ဖတ်နိုင်တဲ့ အီလက်ထရောနစ် အချက်ပြမှုတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲဖော်ပြပေးပါတယ်။